नेपाल ‘रेल्वे’ युगमा प्रवेश गरिसक्यो
आश्विन २०, २०७७ मंगलवार
विगतमा रेलसेवा नेपालमा थियो तर ध्वस्त बनाइयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेल गुडाइन्छ भन्दा कागजको रेल सडकमा तेस्र्याएर खिल्ली उडाइयो अल्छी कुरौटेहरूबाट । तर, लामो प्रतीक्षाका रूपमा रहेको रेल आएसँगै रेल सपना यथार्थमा परिणत भएको छ । रेल चाँडै नै नियमित सञ्चालनमा आउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ बताउनुहुन्छ । धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म रेलसेवा सञ्चालनका साथै मुलुकमा रेलसेवाको विकासका लागि भइरहेका प्रयासबारे मन्त्री नेम्वाङसँग गोरखापत्रका समाचारदाता भउचप्रसाद यादवले गर्नुभएको कुराकानी :
 नेपाली भूमिमा नयाँ रेल आउँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र र जनमतको जगमा उभिएर गठन भएको वर्तमान सरकारले अहिले मुलुकको नयाँ निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाएको छ । घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता र जनताको विश्वासलाई आत्मसात् गर्दै सरकार सञ्चालन भएको पहिलो वर्षदेखि नै अब नेपाल रेलमार्गको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्दै नीति तथा कार्यक्रम बन्न थालेको हो । कुर्था–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि नयाँ ‘सेट’ ल्याइएसँगै नेपाल रेलमार्गको अर्काे चरणमा प्रवेश गरेको छ । अब यो जयनगरदेखि कुर्था, बिजुलपुरा हुँदै बर्दिबास पुग्छ, जुन पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ‘कनेक्सन’ भएको ठाउँ हो ।
 जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेलसेवा सञ्चालनका लागि के–के तयारी हुँदै छ, कहिलेदेखि नियमित सञ्चालनमा आउनेछ ?
कुर्था–जयनगर रेलसेवा चाँडै नै सञ्चालनमा आउनेछ । रेल देखाउनका लागि होइन, चलाउनकै लागि ल्याइएको हो । हामी भोलि–पर्सिदेखि नै रेल सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छौँ । तर, ‘क्रस बोर्डर’
(सीमा वारपार) चल्ने यो रेल सञ्चालनको सबैभन्दा ठूलो बाधक कोभिड–१९ को महामारी नै रहेको छ । कोभिड–१९ महामारीको सङ्क्रमण कम हुनासाथै तथा नेपाल र भारतबीचको सिमाना खुला भएपछि यो रेलसेवा सञ्चालनमा आउनेछ । अब रेल सञ्चालन गर्नमा कुनै समस्या छैन । कोरोनाबीच पनि हामी आउन लागेका चाडबाडहरू मनाउनेछौँ, रेल पनि सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ, चलाउनका लागि आन्तरिक योजना बनाइसकेका छौँ ।
 रेलसेवा सञ्चालनका लागि अन्य के–के तयारी भइरहेका छन् ?
 मुलुकमा अन्य रेलमार्ग निर्माण चलेको छ ?
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई बर्दिबासदेखि निजगढसम्म दुईवटा ठेक्का सम्झौता भएर ७० किलोमिटर खण्डमा निर्माणकार्य सुरु भइसकेको छ । यो रेलमार्गले दक्षिणबाट र उत्तरतिरबाट आउने रेलमार्गलाई ‘कनेक्टिभिटी’समेत प्रदान गर्छ । मुलुक विद्युत्मा आत्मनिर्भर भइसकेकाले विद्युतीय रेल सञ्चालनमा ऊर्जाको समस्या पनि आउने छैन ।
 केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययन प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
 नेपाल र भारतबीच ‘क्रस कन्ट्री लिङ्क’ रेल्वे निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?
 अदालतको निर्णय र बजेटको समस्याबीच पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ?
 पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि खर्च कसरी जुटाउन सकिन्छ ?
 रेलमार्ग विकासका लागि रूससँग सहकार्यबारे छलफल अगाडि बढिरहेको सुनिन्छ नि ?